Sidee dib ugula soo noqotaa taleefankaaga Android batari aan lagaran karin | Androidsis
Sida loogu qasbo dib-u-bilaabida mobilada Android batari aan la saari karin
Maanta inta badan taleefannada Android waa unibody. Tan macnaheedu waa in batteriga qalabka aan la saari karin.. Wax is beddelay oo ku saabsan aalado in yar ka hor. Tani waxay naga hor istaageysaa inaan sameyno wax aan qabannay wax ka badan hal mar oo hore. Maaddaama mararka qaarkood, markii taleefanku barafoobi lahaa ama joojin lahaa jawaab celinta, waad ka saari lahayd batteriga.
Tani waxay ahayd wax naga caawisay inaan dib u bilowno qalabka, markuu joojiyay jawaab celinta. Nasiib darrose, iyada oo la adeegsanayo naqshadda unibody ee inta badan taleefannada Android hadda tani suurtagal maahan. Sideen dib ugu bilaabi karnaa casriga casriga ah? Waxay kuxirantahay astaanta waxaan heysanaa qaab kale, oo aan hoosta kuugu sheegi doono.
Dib u bilaabida taleefanka ayaa waxtar badan leh, kaas oo ka caawiya xalinta khaladaad badan oo ay leedahay, sidaan horeyba kuugu sheegnay. Sidaa darteed, haddii wakhti kasta oo aad dhibaato ku haysato qalabka oo aad rabto inaad awood u yeelato inaad dib u bilowdo, waxaad awoodi doontaa inaad u sameyso qaab ka duwan taas oo ku xidhan astaanta taleefankaaga. Waxaan kuu sheegeynaa qaababka ku jira taleefannada gacanta ee ugu waaweyn Android.
1 Xoog dib ugu bilow Google Pixel iyo Nexus
2 Xoog dib ugu bilow BQ
3 Xoog ku soo celi LG
4 Dib ugu bilaw taleefannada Huawei iyo Honor
5 Dib uga bilow HTC
6 Xoog ku soo celi Sony Xperia
7 Ku celi Samsung
Xoog dib ugu bilow Google Pixel iyo Nexus
Haddii aad leedahay Google Pixel, hadda waxaad heshay cusboonaysiinta bisha janaayo, ama Nexus, habka lagu qasbo in dib loogu bilaabo labaduba waa isku mid. Waxa ay tahay inaad sameyso kiiskan waa inaad hoos u dhigtaa badhanka awoodda, ilaa 10 ilbiriqsi ama wixii la mid ah wadar. Markaad sidan sameyso, waxaad arki doontaa in shaashadda taleefanka ay gebi ahaanba dansan tahay. Marka tani dhacdo, markaa waxaad awoodi doontaa inaad bilowdo qalabka si caadi ah.
Xoog dib ugu bilow BQ
Telefoonada BQ badanaa waxay isticmaalaan nooc nadiif ah oo ah nidaamka qalliinka, waxay ka mid ahaayeen kuwa waaweyn Android One xoojiyeyaasha suuqa. Marka sida aan fluffing dib u bilaabista qalabka waxay la mid tahay tan Google Pixel. Iyadoo aan dhibaato badan laga qabin arrintan, sidaas darteed.
Waxa ay tahay inaad sameyso, ugu yaraan moodooyinka hadda jira ee BQ Aquaris, waa riix batoonka korontada in ka badan 10 ilbidhiqsi. Waxaa jira noocyo qaar ka mid ah astaanta taas oo ay lagama maarmaan tahay in la riixo badhanka awoodda iyo badhanka mugga hoos u dhaca, isla waqtigaas inta lagu jiro 10-ka ilbiriqsi. Waxay kuxirantahay qaabka gaarka ah.
Xoog ku soo celi LG
Marka laga hadlayo taleefannada unibody LG, habka dib loogu bilaabayo qalabku xoogaa wuu ka duwan yahay. Xaaladdan gaarka ah, waa inaan qabannaa badhanka korantada iyo mugga isla markaa, dhowr ilbiriqsi. Markii aan sidan yeelno, waxa ugu horreeya ee dhici doona ayaa ah in shaashadda la qaado, laakiin waa inaadan sii daynin badhannada wakhti kasta. Qiyaastii toddobo ilaa siddeed ilbiriqsi kadib, tirinta ayaa ka muuqan doonta shaashadda. Waxay ka digeysaa in taleefanka uu dib u bilaabmayo. Marka, waan sii deyn karnaa badhannada.
Dib ugu bilaw taleefannada Huawei iyo Honor
Labada nooc ee Android wax badan ayey wadaagaan marka laga hadlayo taleefannadooda, wax sidoo kale ka muuqda habka aan dib ugu bilaabi karno iyaga. Waa hab aad ula mid ah waxa aan ugu baahanahay Pixels. Sidaa darteed, waa inaan riix batoonka korontada dhowr ilbiriqsi. Ilaa shaashadu madoobaato. Markaa waa inaad sii deysaa badhannada.
Dib uga bilow HTC
Haddii aad leedahay taleefan HTC ah, habka dib loogu bilaabi karo qalabka waa adigoo riixaya laba badhan, sida kiiska LG iyo noocyo kale. Kaliya markan waa inaad ku qasbataa isticmaal badhanka korontada iyo badhanka mugga. Sidaa darteed, waa inaad labadaba isku mar riixdaa dhowr ilbiriqsi. Qiyaastii shan iyo toban ilbiriqsi guud ahaan, Android si ay dib ugu bilowdo sidan.
Waxaad arki doontaa in shaashadda ay isku beddeleyso ilbiriqsiyo ka dib. Kadib, hadda waad sii deyn kartaa badhannada qalabkuna si caadi ah ayuu dib ugu bilaabi doonaa. Marka dhammaan howlaha ayaa dib u bilaabmaya.
Xoog ku soo celi Sony Xperia
Sony Xperia sidoo kale waxay isticmaashaa naqshad gaar ah inta badan taleefannadeeda hadda. Haddii aad haysato casriga casriga ee Jabbaan oo aad rabto inaad ku qasabto dib-u-bilaabid, kaliya riix oo hay batoonka korontada. Xaaladdan oo kale, hayso badhanka oo la riixay wadar ahaan illaa lix ilbiriqsi.
Samee tan illaa qalabku ka gariirmayo, ka dibna sii daa badhanka, si aad dib ugu bilaabi karto sidan.
Ku celi Samsung
Ugu dambeyntii, waxaa suurtagal ah in taleefankaaga casriga ah ee Android uu yahay nooca Samsung. Xaaladdan oo kale, si aad dib ugu bilowdo qalabka, waa inaad sii haysataa adoo hoos u dhigaya badhanka awoodda iyo mugga hoos u dhaca dhowr ilbiriqsi, inta udhaxeysa toddobo ilaa toban ilbiriqsi ama wixii la mid ah. Waqtigu wuxuu kuxiranyahay nooc kasta oo gaar ah. Waxaa jira noocyo qaar oo aad adiguba gujiso Guriga.
Waxaa jira taleefanno si toos ah dib ugu bilaabaya. Laakiin moodooyinka Samsung qaarkood, waxaad gashaa Boot ModeHalkaas, waxaad ka dhigi kartaa dib-u-bilaabid adigoo gujinaya ikhtiyaarka Power Down. Si tan loo sameeyo, isticmaal badhanka mugga si aad u doorato ikhtiyaarka ku jira qalabka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Batariga » Sida loogu qasbo dib-u-bilaabida mobilada Android batari aan la saari karin
Sony way joojin kartaa soosaarka moodeellada Compact
Snapdragon 675 wuxuu ku daadanayaa AnTuTu oo wuxuu ka sarreeyaa Snapdragon 710 waxqabadka